Ka bilaabida mashruuc Git iyo Google Code (Qaybta II) | Laga soo bilaabo Linux
Sida ballanku yahay deynta, halkan waxaan ku socon doonaa talaabooyinka lagama maarmaanka u ah abuuritaanka mashruuc Nambarka Google.
1 1. Waxaan galnaa Google
2 2. Waxaan abuureynaa Mashruuca
3 3. Helitaanka xogta keydinta ee Koodhka Google
4 Goor dhaw…
1. Waxaan galnaa Google
Waxa ugu horeeya ee ay tahay inaan sameyno waa inaan galno koontadayada Google, waxaan galnaa goobta Nambarka Google iyo geeska midig ee kore waxaan ka heli doonnaa soo galitaanka. Bidix waxaan ka badali karnaa luqadda.
2. Waxaan abuureynaa Mashruuca
Markaad gasho bogga koontadayada, waan xaqiijin karnaa tan sababtoo ah geeska kore ee midig waxaan arki doonaa cinwaanka emaylkeena Google, oo waxaan gujin karnaa iskuxirka oranaya Abuur mashruuc cusub. Tani waxay dib noogu noqon doontaa bog aan ku dhammaystirno faahfaahinta mashruuceenna.
Waxaan dhameystireynaa xogta mashruuceena markaan dhameyno waxaan si fudud u riixeynaa badhanka Abuur Mashruuc.
Hadda oo aan abuurnay mashruuceenna, waxay na tusaysaa boggeeda weyn. Haatan wax badan kuma sii qaban doonno Nambarka Google. Waxay kaliya inooga hartay inaan helno macluumaadka aan awoodi karno inaan goor dambe ku xirno oo aan faylalka ku soo gelino tag.
3. Helitaanka xogta keydinta ee Koodhka Google
Taas awgeed waa inaan tagnaa qaybta source (Koodhka isha) halkaasna wuxuu na siinayaa 2 xulasho oo aan ku xirno.
La Doorashada 1 waxay na weydiin doontaa lambarka sirta ah googlecode.com waqti kasta oo aan dooneyno inaan wax uun qabanno riix, wax aakhirka dhib badan. Gaar ahaan maadaama eraygan sirta ahi uu yahay mid si otomaatig ah loogu abuuray mashruuca, maahan lambarkayaga sirta ah koontadeena. Taasi waa sababta aan ugu talinayo isticmaalka Doorashada 2.
Waxaan adeegsan doonnaa Xulashada 2, waxaan gujineynaa iskuxiraha oranaya lambarka sirta ah ee googlecode.com. Kani wuxuu na tusi doonaa bog cusub halkaasna waxaan ka soo guurin doonnaa sadarka ugu dambeeya ee qaybta koowaad. Midka aan aragno ayaa lagu muujiyey sawirka soo socda.
Ha walwelin, eraygan sirta ah ee aad aragtay horay ayaan u cusbooneysiiyay waxna uma tarayso wax kale 😉
Waxaan ka abuureynaa faylka HOME isticmaalahayaga loo yaqaan .netrc gudahana waxaan dhigeynaa waxyaabaha aan hadda ka soo guurnay bogga. Kiiskan:
Ilaa hadda waxaan ka abuurnay mashruuca Nambarka Google waxaana diyaarsanahay feylka aanxiri doonaa»Bakhaarkayaga fog markii aan dhignay keydkeena maxaliga ah tag.
Qaybta xigta waxaan ku arki doonaa sida loogu abuuro mashruuca mashiinkeenna loona qaabeeyo tag xakamaynta nooca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Bilaabida mashruuc Git iyo Google Code (Qaybta II)
Yakuake had iyo jeer wuxuu kujiraa Shaashad Buuxda (Habka Full Screen)